အွန်စောတို့ဌာနေ: Korea Culture Tour ဒုတိယပိုင်း
Korea Culture Tour ဒုတိယပိုင်း
ဘုရင့်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ မြုပ်နံရာ ဂူသင်္ချိုင်းတွေနေရာကနေ ထွက်လာပြီး မကြာခင်မှာပဲ နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်လာတာနဲ့ ဒီဆိုင်လေးမှာ အဖွဲ့လိုက်အားပေးခဲ့လိုက်ကြတယ်။ ငါးရှဉ့် (장어구이)၊ အာပူရှာပူ (매운 탕)၊ ကြက်ကောင်လုံး (토중 닭)၊ ဘာဘီကျူး (생 불고기) တဲ့။ ဆရာတွေက ဆိုဂျူ (Soju) တော့မတိုက်ဘူးဗျ။ မယ့်ဂျူ (ဘီယာ) တော့တိုက်တယ်။ နော်နော်ကတေ့ာ ဂျူ့စ် (Juice) လေးပဲ အားပေးခဲ့တာပါ။ ဟဲ--ဟဲ--။ အင်္ဂလိပ်ဆေးသုံးနေချိန်မို့ပေ့ါ။ မဟုတ်လို့ကတော့လား--ဟဲ--ဟဲ---။ ဘယ်နေမလဲ။
နေရာကသိပ်မဝေးတော့ သိပ်ကြာကြာ ကားမစီးလိုက်ရပါဘူး။ မွန်းလွဲ တစ်နာရီခွဲလောက်မှာ ကိုရီးယား အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဒါဆန်း ဂျွန်ရိပ်ရောင်း (Dasan Jeong Yak-yong) (Korean religious philosopher) အကြောင်း ထိမ်းသိမ်းထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ဒီမှာလည်း လိုက်လည်ရှင်းလင်းပေးမဲ့ သူ (Guide) က အဆင်သင့်ပါ။ ပြတိုက်က၀န်ထမ်း ဖြစ်တဲ့ Saw Mon Su (서문수) က လိုက်လည် ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။ ကိုရီးယားလိုပဲရှင်းတာဆိုတော့ အကုန်တော့ နားမလည်ခဲ့ဘူးဗျ။ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ PCNB က ၀န်ထမ်းတွေလည်း မောကုန်ကြလို့ ဒီရောက်တော့ တစ်ခါတစ်လေမှပဲ ဘာသာပြန်ပေးကြတော့တယ်။ ဒါက နော်နော်တို့ကို ရှင်းလင်းနေတာလေ။ ဒါကတော့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးပေါ့။ သူ့ရဲ့ နားနေဆောင် (Living Room) ပေါ့။
သူ့ရဲ့သက်တန်း ၇၅ နှစ်အတွင်းမှာ စာအုပ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရေးသွားခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်စိတ်ကူးပန်းချိတွေကလည်း မနည်းပါပဲ။ သူနဲ့သူ့အစ်ကို တို့ဟာ အစောဆုံး Roman Catholicism အဖြစ်ပြောင်းခဲ့သူတွေပါတဲ့။ နေတာက နမ်ရင်ဂျူ Namyangju, ဂရောင်းဂျီး ပြည်နယ်မှာပါ (Gyeonggi Province)။
ဒါကတော့ သူ့ အသုံးအဆောင် တွေလေ။
ဒါလေးကတော့ အိမ်ရှင်မ စဖိုဆောင်ဝင်နေတာလေ။ မြင်မြင်ချင်းတော့ ဘာများလုပ်နေပါလိမ့်လို့ထင်မိတယ်။ ဟီး--ဟီး--။ ထိုင်နေပုံက တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့။ ၀တ်ရုံတော်ကြောင့်ပါ။ သူတို့လည်း အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ထင်းမီးသုံးတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျ။ အခုချိန်မှာတော့ လျှပ်စစ်အလျှံပဲသုံးနိုင်နေတော့ ထင်းမီးကို မမြင်ရတော့ဘူး။ အခုလို ပြတိုက်မှာမှပဲမြင်ရတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကြည်လေရာ မြင်လေရာ သစ်တောတွေချည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ တောပြုန်းစရာအကြောင်းမှမရှိတော့တာလေ။ အင်း စိတ်ကူးကဘေးရောက်ကုန်ပြီ။
ဒါကတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်တဲ့ နွား ပါတဲ့။ နွားကို တော်တော်တန်ဘိုးထား ထိမ်းသိမ်းထားတတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါက သူ့ရဲ့ဂူ ။ ဘုရင်တွေမြှုပ်နှံတဲ့ဂူတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။ ဂူထိပ်မှာ (mount) ပါတယ်။ ကျောက်ပြားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိရိစ္ဆာရုပ်တုတွေတော့မရှိဘူး။ အမည်ရေးထိုးထားတဲ့ ကျောက်တိုင်ပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒါက တစ်လျှောက်လုံး မှတ်တမ်းတင်ပေးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာလေ။ ကြိုးကြိုးစားစားရိုက်နေတာလေး ကျွန်တော်က တဆင့် ရိုက်ယူလိုက်တာ။ ဒါကတော့ ဂူပေါ်ကအဆင်း လမ်းလေးဗျ။ အပေါ်ကနေကြည့်ပြီး အာလိမ်လှေကားလေးလို လုပ်ပေးထားတာလေး သဘောကြလို့။ နော်နော်ကနောက်ဆုံးမှဆင်းခဲတာလေ။ ရှင်းလင်းပေးတဲ့သူက ဟိုရှေ့ဆုံး အောက်ခြေမှာရောက်နေပြီလေ။
ဒါလေးဆွေကတော့ သူရဲ့ကျောက်ရုပ်နဲ့ လမ်းညွန်လေးပါ။
ဒါကတော့ ရှင်းလင်းဆောင်အတွင်းမှ ပန်းချီတွေပါ။ ပန်းချီကအားလုံး ၈ ပုံတောင်ရှိတာ။ သမိုင်းဝင်ပန်ချီ။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကို ပုံဖေါ်ထားတဲ့ပန်ချီကားတွေပါတဲ့။ မထမဆုံးပုံကတော့ ရေပြင်ကို ဖြတ်ကျော်ဘို့ လှေတွေကို ကန့်လန့်ခံပြီ တံတားဆောက်ထားတဲ့ပုံပါ။ ဒီလောက် ရေခရီးကို ဒီလိုအစီအမံနဲ့ ရအောင်ခရီးသွားခဲ့တာပါတဲ့။
ဒီမှာ နေတဲ့ သူ့မိခင်က စွန့်လွှတ်စွန့်စားခဲ့တဲ့အတွက် သူကိုင်တဲ့ တောင်ဝှေး တောင် တစ်ချောင်းလုံး အနက်ရောင်ပြောင်းနေပါတယ်တဲ့။ လက်ဆစ်တွေလည်း တုပ်နေ တယ်ပြောတာပဲ။ ဒါကတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ပန်းတွေက အရန်းလှပပြီး အထိအတွေ့ကိုခံစားတတ်တယ်။ ကလိထိုးလျှင် ရားတတ်တယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်ဆိုလို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက အပင်ကို ကလိကြည့်နေကြတဲ့အထဲက ဘရာဇီးကျောင်းသူ တစ်ယောက်ကလိနေတုန်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လိုက်တာ။ ဒါကတော့ ပညာရှင်ကြီးတီထွင်ခဲ့တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးမှာသုံးတဲ့ ကျောက်မစက်ပါတဲ့။ သိပ်ကြီးလေး တဲ့ ကျောက်တုံးတွေကို ဒီနည်းနဲ့မ တင်ပါတယ်တဲ့။
ဒါလေးတွေကတော့ ဒီပြတိုက်ဧရီယာထဲက မြင်ကွင်းအချို့ပါ။
ညနေ ၃း၂၇ နာရီမှာ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာရေးခရီးစဉ် ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။ မနက်က ၇း၂၇ နာရီက စတင်ရထားစီးခဲ့တာလေး သတိရလိုက်သေးတယ်။ မိနစ်တူနေလို့လေ။ ညနေ ၄ ခွဲလောက်မှာ PCNB ရုံးချုပ်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။ လူစုခွဲပြီး လာလမ်းအတိုင်းပြန်ခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ ၆း၃၅ မှာ ယုန်ဆန် (용산) ဘူတာကနေစီးလာခဲ့ရာ ၈း၂၁ မှာ ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ ရယ်ဆန် (예산) မြို့လေးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အကြမ်းမျှ ဖေါ်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိလိုလျှင် ဒီမှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သလို အောက်မှာလည်း ကော်ပီ (Copy) ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။
Jeong Yak-yong, also Jeong Yag-yong or Dasan (1762–1836), wasaleading Korean religious philosopher during the Joseon Dynasty. He is commonly regarded as the greatest of the Silhak thinkers, who advocated that the formalist Neo-Confucian religious philosophy of Joseon return to practical concerns. Jeong Yag-yong and his brothers were also among the earliest Korean converts to Roman Catholicism.
Jeong was born, and also ended his days, in modern-day Namyangju, Gyeonggi province.
Jeong served the government inavariety of capacities throughout his life. He supervised the construction of Hwaseong Fortress in Suwon in the early 1790s. In 1794, he served as secret royal inspector (암행어사) of Gyeonggi province, investigating misconduct by other officials. This opened his eyes to the scale of official misconduct, and may have inspired much of his later writings.
Jeong is known above all for his work in synthesizing the Neo-Confucian thought of middle Joseon. In the process, he wrote widely in fields including law, political theory, and the Confucian Classics. He sought to return Confucian scholarship toadirect connection with the original thought of Confucius. He called this return to the classics "Susa" (수사/洙泗) learning,areference to the two rivers that flowed through Confucius' homeland.
In the service of this idea, Jeong criticized the philosophers of his time for engaging in both fruitless etymological scholarship and pursuing philosophical theory for its own sake. He argued that scholarship should be re-focused on more important concerns such as music, ritual, and law. This was not only an intellectual butapolitical assertion: he argued that the gwageo examinations by which people qualified for royal service should be reformed to focus on these concerns.
At different times in his life, Jeong adoptedawide variety of ho, or pen names. The most well-known of these, Dasan, means "tea mountain." Jeong adopted it while in internal exile nearamountain of the same name, in Gangjin County, on the coast of South Jeolla province. Other pen names of his include Sammi (삼미/三眉), Yeoyudang (여유당/與猶堂), Saam (사암/俟菴), Jahadoin (자하도인/紫霞道人), Tagong (탁옹/籜翁), Taesu (태수/苔叟), Munamirin (문암일인/門巖逸人), and Cheolmasancho (철마산초/鐵馬山樵).
At birth, his father gave Jeong the courtesy name Gwinong, (귀농/歸農), which means "returning to the land." This reflected his father's decision to leave government service in the wake of King Yeongjo's murder of the crown prince. AsaRoman Catholic, he received the baptismal name John, or 요한 (Yohan), in Korean.
After his death, the King bestowed on Jeong the posthumous name Mundo (문도/文度). Mun refers to writing or literature, and do to law.
Posted by Korea-Myanmar Mutual Benefit at 12:00 AM
Korean Traditional Concert held in September at De...
Daejon City and Immigration Office, Required docum...
Kongju National University at Kongju City, A City ...
ကြော်ငြာလေးပါပဲ။ သဘောကျလို့တင်ထားတ။ ရှုစားသွားပါအုံ...
အသားအရေ စိုပြည်ဖို့ သောက်သုံးကြပါစို့တဲ့။ ကြော်ငြာ...